PSJTV | निर्वाचन आयोगमा चरम अनियमितता
निर्वाचन आयोगमा चरम अनियमितता
बुधबार, २८ चैत २०७४ पिएसजे न्युज
शतप्रतिशत आर्थिक अनुशासनमा रहेर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गराएका छौँ । यो मेरो दृष्टिकोण हो । तर, महालेखाले तयार पारेको रिपोर्टमा त भ्याएसम्म आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिन्छ नि ? त्यो उहाँलाई नै सोध्नुस् । मैले रिपोर्ट हेर्न पाएको छैन । देख्न पाएको छैन ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको रूपमा प्रमुख आयुक्तले मासिक १५० र आयुक्तले १०० लिटर इन्धनबापत नगद लिँदै आएका छन् । त्यो पैसा गोजीमा हालेर उनीहरूले आयोगबाट इन्धनबापत कुपन पनि लिँदै आएका छन् । अझ आयुक्त इला शर्माले त मासिक इन्धनको पैसा मात्र होइन, आफ्नो एउटै गाडीका लागि डिजेल र पेट्रोलको कुपन पनि लिएकी छिन् । यो अनियमितता महालेखाले औँल्याएको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
एक लाख ७३ हजारका दरले आइफोन खरिद आयोगले ६ थान आइफोन सेभेन प्लस खरिद गरेको छ जसको बजारमूल्य अधिकतम एक लाख ३२ हजार हुन्छ । तर, आयोगलाई प्रतिफोन १ लाख ७३ हजार तिराएर किनिएका ६ मध्ये दुईवटा फोन प्रमुख आयुक्त एक्लैले बोकेका छन् । त्यस्तै, ७६ हजार ९९९ को सामसुङ ग्यालेक्सी ५७ र ३३ हजार ५२८ मूल्यको र ओप्पो ९३७ खरिद गरिएको छ ।
यसरी भइरहेको छ पशुपतिको अथाह जग्गा हिनामिना
काठमाडौं: चार दिनदेखि भएको लगातारको आन्दोलनले देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ। असारमा सम्पन्न नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने नीति, योजना कार्यान्वयन गर्न तयारी गर्नुपर्ने समयमा आन्दोलनले सबै कार्य ...
तपाईंलाई यदि हामीले तपाईंको खल्ती सुनको खानी हो भन्यौं भने पत्याउनुहुन्छ ? हुँदैन नि , तर यो कुरा शत प्रतिशत साँचो हो । सुनको खानी हो तपाईंको बोक्ने मोबाइल । मोबाइल ...